Ukucocwa kweTopiki - iGeofumadas
Ikhaya/GIS asibonise/Ukucoceka kwe-Topological
Isenzo sezixhobo ze-GIS sibizwa ngale ndlela ukuphelisa ukungahambisani kwevector kwimimiselo evunywe ipolotiki yendawo. Isixhobo ngasinye sibaphunyelele ngendlela yaso, makhe sibone imeko yeBentley Imephu kunye ne-GIS enezinto ezininzi.
I-Microstation ibandakanya izixhobo ezimbini ezifanayo, enye yenziwe yasebenza kwi-keyin (ukucoca incoko yababini) kunye nenye eyaziwa ngokuba yi-topology Cleanup. Ngezizathu zokusasazeka, sonke sikhetha eyokuqala, nangona kungekho qhosha elinye loku ngaphandle komyalelo wakudala.
Ibandakanya iindlela ezintandathu zethopholoji kwisakhelo sasekhohlo, ngelixa kwinxalenye esezantsi kukunyamezelana kwaye ekunene indawo ekuyiwa kuyo kunye neempawu apho kulindelwe ukungangqinelani. Nangona ibizwa ngokuba kukucoceka ngokwaselwandle, ayilo gama lifanelekileyo, kunoko zizixhobo zokucoca vector ezibandakanya:
Into encinane, yayisetyenzisiweyo kodwa kukukunqanda ukusetyenziswa kakubi kweendlela ngokungenasidingo
Phantse nganye nganye kukho enye indlela yokukhetha indawo ekuya kuyo impazamo, ukhetho lokumakisha okanye lokuphelisa kunye nokunyamezelana. Kwakungekho kubi, bekukho nezixhobo ze-mrf ezidityaniswe ne-mdl ezikuvumela ukuba ukhangele iibugs. Kodwa yayihlala iyintloko nakweyiphi na imeko, hayi ngenxa yococeko olwalubukhali kodwa nolusebenzayo kamva kuhlalutyo lomhlaba okanye lwendawo. Ukwenza umzekelo, kwimaleko eyahlukeneyo yemephu, ukungangqinelani kweendawo bekuyingxaki, iphambene.
Ipenel yatshintsha ngeBentley Imephu, ihlala ikhona Ucoceko lweengxoxo nangona ifuna ukuba iprojekthi ivulekele, kodwa enye enye indawo yayigxininiswe kwipaneli enye eneetabs. Ukongezelela, izinto ezinokusebenza kakhulu zongezwe phakathi kwazo:
Ulawulo lokucoca ngamehlo
Unokucoca uhlobo lwezinto (umgca, i-arc, i-polyline njll)
Umdlalo ungabandakanya uhlobo lomgca, umbala okanye ubukhulu
Yenza isipele ngokuzenzekelayo kwefayili
Ukugqithisa kunokuphelisa ukuphindaphindwa
Ungagcina ukucwangciswa njengefayile ye .rsc uze uyibize kwakhona
Into esususwe ngayo, ukuba akukho mntu wayesebenzisa ngenxa yokuba ayizange isebenze
Kuya kuba yimfuneko ukuvavanya ukuba ngaba intloko iphuculwe kunye nohlalutyo lwe-topological, kuba ibinzima kakhulu kwaye inyanzelisa ukuchaneka kwezipisi eziphambeneyo kakhulu ukuze ukunyamezelana kungabinangqondo. Iiflegi zezilumkiso zikwangumbane wevektha ongashukumiyo, owenza uninzi lomsebenzi ube sisakhono sokubonakalayo kunokuba siseli elinamandla amakhulu.
I-Bentley kufuneka isebenze kanzima kulo mbandela, kuba nangona i-Bentley Imephu ixhasa uxolo, isiqingatha sithathiwe ezinweleni. Ukongeza ayisixhasi Kalula i-geometries eziyinkimbinkimbi, mhlawumbi ezingenakwenzeka kwi-cadastre kodwa kwezinye iziqendu ezifana nezitshalo zityalo okanye indawo engozi, ukubeka imizekelo emibini. Kwi-Geographics yabaguqulela iiseli okanye iimoko ezinzima, into ongenako ukwenza uhlalutyo lwengqondo. Kufuneka kube lula inkqubo, kuba ezininzi iinkqubo ziye zaqhubela phambili kule ndlela, umzekelo, ukusebenzisa nqakraza I-GIS eninzi yenza umsebenzi okhethekileyo ngaphandle kokufumana ubunzima. Oku kuyasebenza kunye iifayili / i-topology factory, khetha nje izinto kwaye uphakamise iphaneli equka uhlalutyo olukhawulezayo ngokwemiqathango yoluhlu:
Ngaphandle koko, ngokuzikhetha ziboniswa ngemibala eyahlukeneyo kwaye kukho ukhetho lomntu ngamnye okanye olukhulu lokuzilungisa. Yenza utshintsho lokunyamezelana, kwaye oku kungaphakathi kokujonga kunye nokukhetha ukuskrola, yiya ngokulandelayo, uthathe inyathelo kunye nokusondeza.
Ekugqibeleni, umsebenzisi ulungelelanise ukuxhatshazwa okanye ukuxuba izixhobo, kodwa akufanele kube yinto eyenywayo kwintsebenzo esiyihlawulayo kwaye ithemba liya kuphucula ngokuhamba kwexesha.
Ukucacisa ukungathandabuzeki okufikile kwi-imeyile yam.
Umzekelo uboniswe yi-Microstation Geographics 8.5
NgeBentley Imephu V8i Ukusingathwa kweejometri eziyinkimbinkimbi ezifana nezimbobo ngaphakathi kwimilo akusisona ingxaki.
Ukongeza, ekuphatheni kweempawu zeXFM ngeMephu yeBentley, umgaqo wokubopha umda we-node uphulukene nokuphambili kokukwenza ngendlela. Nangona izixhobo zokwenza amakhonkco ziyafana kunye nezo zokuhambisa idatha phakathi kwe-centroid kunye nemilo / umda.
J. J. Patricio uthi:
hello; Uyazi Ndandifuna ukwazi ukuba mibuthoinganceda ingxaki yam kwenzeka ntoni na ndifuna ukwenza itemplate entsha kwaye ushiye olungagqibekanga eza kundinceda xa kudalwa umzobo entsha njengoko profiles imizekelo isimbo esithile parameters, ngoko wayefuna ukwazi ukuba ukwazi ukudala itemplate entsha kwaye oku ezichazwe iparameters ezintsha nokuba design entsha izimbo into, ndiyathemba ungenza ukundinceda kodwa ezinye iimpendulo ndiyaqonda ukuba nobubele kakhulu kwaba miba ngiyabonga kwakhona
Ukuthumela ngaphandle kuqhuba iMicrostation Geographics.
Kufuneka uqhagamshelwe kwiprojekthi, ukuze ikhuphe iifowuni kunye needos.
Kwakhona, ukuthunyelwa kwamanye amazwe kwimiba yohlobo lohlobo, kunye nedatha edibeneyo. Akuyi kusebenza kunye neendawo kunye nemida.
Ukuba konke oku kulungile, ndixelele ukuba ukuthumela ukuthunyelwa kwamanye amazwe kukuthumela umyalezo. Ungazama kwakhona ukuvula ifayile ye-dbf nge-Excel ukuze ubone ukuba unedatha.
Hi lo mxholo kakhulu, Ndinomdla kakhulu ukwazi ukuba akukwazeki ukuba ukuthumela ifayile DGN shp ngokupheleleyo kuba xa kumazwe akugqiba mna ivelisa zingazaliswanga le datha Ndiyaqonda xa uzama ukuthumela ifayile kwakhona yi bentley imephu
Ndiya kuxabisa ukuba umntu unesisombululo okanye iingcebiso
ok! Makhe ndihlolisise imephu ye autocad kwithuba elithile, kwaye ndibacebise nabo. mbulela
Ngaloo nto yi-AutoCAD Imephu ye3D okanye i-AutoDesk Civil 3D. Ngale ndlela unokwenza oko uza kwenza naluphi na i-GIS, qhagamshelana nedatha etafile, yenza uhlalutyo lwamaqondo, iimephu eziphathekayo, njl.
Ukuba ufuna iyinxibe kwikhonkco elula, evula iimpawu into, uyaqaphela intsimi ekuthiwa ngokokugqama, apho ungadibanisa umendo url kweziko lewebhu, indlela apho ifayile kwi diski lwasekuhlaleni, okanye isakhiwo enye imephu yedwg.
Kwimeko ye-AutoCAD, isekela kuphela i hyperlink nganye into.
imibuzo ngokuba ziingcali entsimini, uphando ngako GPS, unayo kwi AutoCAD, kukho abathile isicelo ukuba ungadibanisa zobumnini ethile CAD okanye udinga i Control yoMsebenzisi ngeebhloko, kunye nendlela ukukhonkca umfanekiso element CAD okanye ibhloko, ç.
Siyabonga kubo bonke abafaka isandla kule forum.
Akunjalo, yileyo kuphela i-248 ivumelekile, kodwa nge-996 imigqa iyinto enokwenzeka ukuba ndiyisebenze nayo.
Ukungalungi, umbhali we-macro wayekhuselekile ngephasiwedi, kwaye wayishiya ibekwe kumigqa ye-996. Wenza okukhusela imisebenzi evela kwiikholomu ze-996, ukuze inkqubo isebenze kunye neeseli ngokuthe ngqo.
Ukuyihlela kuthetha ukuphula ikonkco ngekhowudi.
Umsebenzi ophezulu kakhulu wephepha, umbuzo ngokwemivavanyo endiyenzile inqamana nenani lamaphupha kwigrafu, kwimeko yam ndifuna ukwenza iigrafu kufuphi ne-4000 points, ndingayitshintsha njani le tafile echanekileyo kuba Kuza kuthatha ixesha elininzi lokuba ucebe kwicandelo.
Ewe, into endiyaziyo yi-XYZ-DXF, eyenzekayo kwi-dxf ngongoma ye-Excel uluhlu. Ikholomu yekhowudi ingaba nelinye uhlobo lweedatha, kwaye ikholomu yokucwangcisa ikuvumela ukuba uhambise amanqaku kumgangatho othile.
Nantsi wachaza inyathelo ngesinyathelo.
Enkosi kakhulu, iyasebenza. omnye umbuzo apho kuya kubakho abathile isicelo evumela ukuba DGN okanye DWG data igrafu lugcinwe kwifomati Excel, XY iququzelela kwaye kuvumela ukuba wongeze ingongoma iyelenqe a caption itekisi agcinwe endle bahlabele.
Enye indlela yokusebenzisa umyalelo wokukhetha oyingqiqo, ongayenza ngayo ukhetho ngokuma, kwaye sele sele ukhethile izinto ezikhethileyo usebenzisa isicelo.
Nge Microstation XM okanye ngaphezulu, ungagcina ucingo.
Okokuqala wenza ucingo lwakho
usebenzisa i-key in
ungena, ucingo, ngoko ukhetha umgca, ke ukhetho luvela:
ukhetha naluphi na, uze ufumane iphaneli ekuvumela ukuba ukhethe uhlobo lwendawo yocingo (ngaphakathi, isikrini, njl.).
Emva koko uqakraza kwesikrini kwaye yile nto.
Umbuzo kukho nayiphi na isicelo se-microstation esivumela ukuba ndisebenzise umyalelo we-Drop Element kwimodi eqinekileyo.
Ndiyabulela umhlobo, ndiya kulandela lakho icebiso.
Makhe sibone, ndiza kuchaza izinto ezimbalwa.
Okokuqala, ezi nguqulelo ze Geographics (ngoku i-Bentley Map) ziqwalasela ukuba into eyinkimbinkimbi ye-topology engavumelekanga, oku kuthetha ukuba i-complexchain eneemigca kunye nemigca ayiyikuhlambulula i-topologically clean.
Ngasemva, imbono yokuba amagophe ezi LineStrings iyavakala, ngenxa yokuba software ye-GIS unzima nokulawula iziko ledatha umgca nentaba, oko buyimilo kunye eziphezulu ngamabona abaninzi kangaka lokukhetha ngokugqithisela ibhola kumdlali I-linestring efana ne-curve ingqiqweni. Wena yokuzibona ubuya ukuze wenze isicelo ukuba ivelisa indlela bhokisi kunye nemigama, nokuba ngaphandle egopheni ngokungathi kukho kufutshane kakhulu iingongoma linestring iphambene.
Ngoko ekuhlanjululeni inkolelo, xa usebenzisa izicwangciso zecandelo, liya kubaguqula zibe yimida. Into onokuyichaza kukuba ukunyamezela kangangokuba akukho zininzi zee-vertices okanye zimbalwa kangangokuba ukuma kwekhava kulahlekile.
Oku kunyamezela kuyashintshwa kwi:
Indawo yokusebenza> ukhetho> itopiki> Ukunyamezeleka kwesibetho.
Uvavanyo lwe-10, i-1, i-0.5, i-0.1 njalonjalo uze unelisekile ngobukhulu besigaba ukuba iirebe zihlala.
ukusebenza izakhi linear apho nakwiingqameko iquka, kodwa ukusebenzisa ukucoca yethopholoji efanayo kunye nokudalwa izinto ezintsonkothileyo Geographics jike izinto amelweyo njengoko imigca uthatha isiqalo nesiphelo curve, akukho ndlela okanye isixhobo ezongezelelweyo umgca olandela umlo wekhalo.
Ndiyabonga e-El Salvador .........
Ukhetho oluhle kakhulu, mbulela yonke into.
Khangela, ndiqinisekile ukuba kufuneka kubekho indlela eyinkcazo ngakumbi kwiimodeli, kodwa ndisebenzisa isakhiwo sokuDa nokuSila iCandelo loKwakha:
Ukwenza oku, oko ukwenzayo kuvulwe zombini imidwebo, enye inesitayela igcinwe kunye nezinye ezingenayo. Emva koko wenza ubungakanani beefestile ezincinci kuneembono ezipheleleyo, ukuze ubone zombini.
Uchukumisa ifestile enesitayela, uya kwisethingi, phezulu, kwaye ukhangele isitayela ofuna ukutshintshela kwenye umzobo. Emva koko uyidonsa kwaye uyikhulule kwelinye iwindi, kwaye yile nto. Ngoku ukuba ubona izitayela ezikhoyo kumzobo wakho omtsha, lowo udibeneyo sele ukhona.
Molo, ndiphinde kwakhona kwaye mandikuxelele ukuba uncedo lwakho lundincede kakhulu, kodwa, mmm ...
Ngoku into endikwazi ukuyenza kukuba ndoloza isitayela esenziwe. Ndiyidala isimboli, ndiyisebenzisa kwaye yonke into, kodwa andinakuyenza ukuba igcinwe, oko kukuthi xa ufuna ukwenza umzobo omtsha kodwa ufuna ukusebenzisa isitayela esiyidalayo, ayifuni ukubonakala kum kwaye kufuneka ndiyibuyisele kwakhona.
Ukuba kukho indlela yokuyilondoloza kwaye kwimifanekiso engaphambili ndingayisebenzisa?
hehe ... kwaye uxolo ngenkxamleko, kodwa ndiyazi ukuba ndilitye.
Ok, ukwenza ntoni oku:
Kwisakhelo sokunxele, amathbhu amathathu avela:
obizwa ngokuba ngumxhasi
kule nto, izinto ezahlukeneyo iimephu, iindawo, iingongoma, iiprofayili, iipayipi, izicwangciso ezihamba phambili njl. njll zivela.
ngoko nganye nganye, xa ucofa kwisalathisi esibonisa, izitayela (izitayela zomhlaba) ziboniswa ukusebenzisa umzekelo.
Ukwenza entsha, cofa ekunene kwifolda "yeendlela ezingaphezulu" kwaye ukhethe "entsha". Apho unganika ulungelelwaniso oluyimfuneko, unike igama, kunye nantoni na oyifunayo. Kwakhona ukusuka apha ungayilungisa.
Xa usebenza kumphezulu, ukusuka kwi-prospector tab, cofa ekunene kumphezulu, khetha "iipropathi" kwaye kukhetho "lolwazi" ungakhetha "isitayile somphezulu" oyenzileyo.
Ndiyathemba ukuba ukhonza inkcazo, nantoni na, akuyona inkathazo.
Molo, kwakhona ungenakuwuxhalabela kodwa mna ngokunyanisekileyo ilitye nenyaniso singafani kuye, yaye uphenyo, kodwa akucaci kum ukuba awunayo ukufumaneka uncedo, ngokuba mna nyhani kunjalo kuhlaziywa.
Ewe, xa usebenzisa isitayela kukunika inketho ukudala entsha kwaye uyilondoloze ukuyisebenzisa kamva
U-HELLO, kuqala uvuyiswe kakhulu kule ndawo ehle kakhulu.
Kwaye sorry ukuthatha eli isithuba, kodwa athathe reiente umxholo kulo myalezo ukuba visto.Mi inene kunye Civil 3D, kwaye ndazi mna ngoko ukuba ungagcina uhlobo wadala ndim (umphezulu, imigca nentaba, profiles, amacandelo, njl .).
Kuba kanye ndandifuna ukwenza ezi ngezimbo ze ndikholelwe ukuba ixesha emva ngokufuna kwakhona ukuyisebenzisa ngenxa yokuba ayikwazanga lugciniwe njenge ixesha nada.Pense plantilla.Tal mna engalunganga kuba andiyiva kakuhle imiyalezo Salian lungagcineki.
Ngoko ndicela uncedo lokusombulula le ngxaki nceda.